Shirkadda Ocean Infinity ayaa baadi goobaysa diyaaraddii MH370 oo horay loo waayay - BBC News Somali
Shirkadda Ocean Infinity ayaa baadi goobaysa diyaaraddii MH370 oo horay loo waayay
Image caption Malaysia ayaa baaritaankeeda diyaaradda soo gabogabaysay bishii Janaayo ee sanadkan.
Dowladda Malaysia ayaa heshiis la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka, si ay u baadi goobto diyaadii la waayay ee MH370.
Diyaaradda Malaysia ayaa la waayay sanadkii 2014-kii, waxaana saarnaa rakaab dhan 239 qof.
Baadi goob horay loogu sameeyay diyaaradan ayaa waxaa ku kacday lacag dhan $200 milyan doolar ka hor intii aanan la joojinin bishii Janaayo ee sanadkan.
Shirkaddan oo fadhigeedu yahay gobolka Texas ee Maraykanka ayaa lagu magacaabaa Ocean Infinity, iyada ayaana qarashkeeda isu qabaysa haddii ay wax soo weyso.
War cusub oo laga soo saaray diyaaraddii Malaysia ee la waayay
Malaysia oo xirtay 140 qof oo u dhashay Kuuriyada Woqooyi
Khilaafka is jiijiidka ee u dhexeeya Malaysia iyo Woqooyiga Kuuriya
Shirkadan ma aysan sheegin qarashka ku baxaya baadi goobka, balse sida uu sheegay wasiirka duulista hawada sare ee Australia Daren Chester, waxa ay shirkaddan wax ka baari doontaa aag dhan 25,000km oo baarayaashii Australia horay u sheegeen in laga yaabo in diyaaradda ay ku jirto.
Qarniyaal badan ayaa lasoo isticmaali jiray heshiisyada noocan ah ee dhigaya in haddii shirkadda aysan keenin wixii laga dalbaday marka hore, aanan la siinin wax qaraamaad ah, waxaana habkan loo isticmaali jiray marka maraakiibta ay quusaan si loosoo helo badeecadii saarnayd.
Wasiirka gaadiidka Malaysia Liow Tiong Lai ayaa sheegay in shirkadda Ocean Infinity ay ka mid tahay saddex shirkadood oo arji usoo qoray dowladda ay ku dalbanayaan in la siiyo qandaraas ay ku baadi goobayaan haraagga diyaaradda.